China Carbide Reversible Knives miaraka amin'ny Radius Corner mpanamboatra sy mpamatsy |Xinhua
Ny lelan'ny karbida mafy orina vita amin'ny hazo misy zorony kely, izay ampiasaina amin'ny lohan'ny mpanapaka planer na helical planer cutter amin'ny milina jointer sy planer, hanamboarana hazo, solaitrabe, plywood, chipboard, HDF, MDF.Ny famolavolana zorony radius dia afaka misoroka tsara amin'ny hazo.
Ny orinasanay dia manana tantaram-pamokarana maherin'ny 20 taona momba ny fitaovam-pamokarana hazo tungstène carbide, manampahaizana manokana amin'ny famokarana antsy tungstène carbide azo averina sy insert carbide isan-karazany.
Maherin'ny antsasa-manilan'ny vokatra no aondrana any Eoropa, Etazonia ary firenena sy faritra mandroso hafa.Ny fahombiazan'ny vokatra dia mahafeno tanteraka ny fepetra henjana amin'ny fitaovana edgebander isan-karazany.Ny kalitaon'ny vokatra dia eo amin'ny toerana voalohany eo amin'ny sehatry ny tsenan'ny fitaovana famokarana hazo ao an-toerana sy any ivelany.
Halavany (mm) sakany (mm) Haavo (mm) R
Misy habe bebe kokoa na vokatra namboarina, azafady mba mifandraisa aminay
A: Eny, raha manana fangatahana mazava ianao dia afaka manome santionany maimaim-poana amin'ny fitsapana.
Eny, manana serivisy fanaraha-maso azo antoka ho an'ny vokatra efa namidy izahay.Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay mpiasan'ny varotra.Hahazo serivisy mahafa-po aorian'ny varotra ianao ao anatin'ny 24 ora.
teo aloha: Carbide Rectangular Woodworking antsy azo averina misy loaka 2
Manaraka: Square Carbide Reversible Antsy